မြန်မာ့ဆန်ဈေးကွက် တရုတ်နိုင်ငံကိုပဲ အားကိုးနေမလားအာဆီယံ၏ အားနည်းချက်က တရုတ်အတွက် အားသာချက် ဖြစ်နေဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်ပွဲကို တရုတ် လက်မခံ၍ ဟောင်ကောင်သားများ ဆန္ဒပြတရုတ် ဂက်စ်ပိုက်လိုင်း နိုင်ငံရေးကြောင့်သာ ဖောက်လုပ်ခဲ့ပုံရမြန်မာ့ဆန် တရားဝင် တင်ပို့နိုင်ရေး တရုတ်အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးမည်
Ngal Hriang November 30, 2012 - 1:09 pm By serving Chinese interest, Burma will be alwaysaloser. Other than sucking blood, China may never consider how to help Burma and Burmese. Burma has been dumping ground for China for the last three decades. We must not allow our motherland Chinese wasteland.
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 1, 2012 - 3:59 am totally agree.
Reply MM December 1, 2012 - 3:09 am တရုတ်စီမံကိန်းဖြတ်သန်းမယ့်ပြည်နယ် (ရခိုင်၊ ကချင်)မှာ “ငြိမ်းချမ်းအောင်” တတ်နိုင်သမျှ စစ်အစိုးရတဖြစ်လဲ“ချွတ်စွပ်” အစိုးရက ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပေးနေရပါတယ်။ “၀မ်စွေ့” က စိတ်ဆိုးမှာ အားကီးကြောက်ရတယ်လေ။ ဒါကြောင့် အားလုံးကို အပြတ်ရှင်းနေပါတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ ၁၄၄ နယ်မြေဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေပါတယ်။ တရုတ်တပ်တွေ တာဝန်လွှဲယူတဲ့အထိပေါ့။
Reply foemg December 1, 2012 - 7:45 am In near future, more educated and matured persons ,the ones who are capable of the development works in region and able to take responsibility, are needed indeed in Myanmar National Parliament.
Reply zaw zaw December 1, 2012 - 10:15 am ဒါတွေက တရုတ်ပြည်က လုပ်တာကို အစိုးရကသဘောတူလို့ဖြစ်တာ။ကျွန်တော်တို့ ဗန်းမော်မြို့မှာဆိုရင် ခယကဥက္ကဌ က အစည်းအဝေးမှာ အေစိုးရက လိုင်စင်ထုတ်မပေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သူတို့က ပိုပြီးအကာ အကွယ်ပေးရမယ်ဆိုပြီး ပြောသွားတယ်။အစိုးရက အခုဆိုရင် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအတွက် အများ ကြီးဖြေလျော့မှုတွေပေးနေပါတယ်။လွယ်ဂျယ်ကနေ အစိုးရကို တရားဝင်အခွန်ဆောင်ပြီး ဆင်းတဲ့ကားတွေကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီး တရားမ၀င်မှောင်ခိုသွားတဲ့ကားတွေကို ပိုက်ဆံယူပြီး ခယကဥက္ကဌက လွတ်ပေးနေတယ်။ အစိုးရကိုတရားဝင် အခွန်ဆောင်ပြီးသွားတဲ့ ကုန်သည်တွေ အခုဗန်းမော်မှာ ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်။ဗန်းမော်က ခယကဥက္ကဌက ဗန်းမော်မြို့ရဲ့ ရွှေဆိုင်တွေမှာ ( ၂ ) ရက်၊ ( ၃ )ရက်ဆိုရင် ရွှေ (၁၅) ကျပ်သားလောက်ဝယ်နေတယ် ဗန်းမော်မှာဆိုရင် နာမည်ကြီးပဲ။လွယ်ဂျယ်-ဗန်းမော် မှောင်ခိုလမ်းကနေ တစ်နေ့ကို ကျွန်းကားတွေ (၁၀) စီးထက်မနည်း ၀င်နေပါတယ်။အချို့ကားတွေက ကျွန်းတွေကို အပေါ်ကနေ ဆန်နဲ့ဖုံးပြီး တက်ကြပါတယ်။ လွယ်ဂျယ်မှာ နကသရုံးရဲ့ ခန့်ထားတဲ့စာရေးမ ဒေါ်****မှ ကားတွေကို လွယ်ဂျယ်မှာ လိုက်ရှင်းပေးပါတယ်။ ခယကဥက္ကဌက ဦးဆောင်ပြီး ပိုက်ဆံတောင်း ကျန်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကလည်း လိုက်တောင်းနဲ့ အဆင်ကိုပြေနေကြတယ်။ဒါကို လွှတ်တော်က လူကြီးများ သိစေခြင်ပါတယ်။
Reply aungaugn December 3, 2012 - 6:14 pm နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့ဆိုတာ ကြိုဆိုကြရတာ သဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့်လို့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ရမှာလည်း နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကောင်းများရဲ့တာဝန်ပါ။ ဘယ်လိုရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့မျိုးမဆို ပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့မကိုက်ညီခဲ့ရင်(သို့)ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်စည်းစ်ိမ်ကို အနာဂါတ်မှာထိခိုင်စေနိုင်ရင် လက္ခံဘို့ မစဉ်းစားသင့်ပါဘူး။ဥပမာ အနေနဲ့ တ၇ုတ်ပြည်မှာ ဆည်ကြီးတစ်ခု စီမံကိန်း စတင်ဘို့ ပြင်ဆင်တဲ့အခါ ပြည်သူတွေက သူတို့ရဲ့ အနာဂါတ် ဘေးအန္တရာယ် အတွက် ဝိုင်းဝန်း ဆန္ဒပြတဲ့အခါ အစိုးရက စီမံကိန်းကို ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လို ဒီမိုကရေစီ ကြွေးကြော်နေတဲ့ နိုင်ငံမျုိးမှာ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ အခွင့်ရေးကို ပိုမိုအလေးနက်ထားသင့်ပါတယ်။ဒါမှလည်း ပြည်သူက လေးစားရတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ်ဖြစ်လာမှာပါ။ပြည်သူတွေရဲ့ အနာဂါတ် လူမှု့ရေး ကျန်းမာရေး ထည့်မတွက်ဘဲနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု့ဆိုတဲ့ မူဝါဒကို ပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ သမိုင်းမှာ နာမည်ဆိုးနဲ့ တွင်ရစ်ခဲ့တဲ့ အစိုးရဖြစ်မှာမလွဲပါဘူး။ ပြည်သူတွေက ရိုးသားပါတယ်။ ၇ိုးသားတဲ့ ပြည်သူတွေ နားလည်နိုင်မယ့် လက္ခံနိုင်မယ့် ဖြေရှင်းချက်မျိုးနဲ့ ဖြေရှင်းပေးဘို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံ မှု့တွေကို ၇ိုးသားစွာ ပွင့်လင်းစွာ ထင်သာမြင်သာ ၇ှိအောင်လုပ်ဘို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး လူမှု့ရေး စီးပွားရေး စတဲ့ အရာရာကို သေချာထည့်တွက်ဘို့ အရေးကြီးကြောင်းပြောပါရစေ ။